Chelsea ayaa dib u dhigtay in Manchester City ay hanato horyaalka Premier League kadib… – Hagaag.com
Posted on 8 Maajo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Chelsea ayaa dib u dhigtay hanashada Manchester City horyaalka Premier League maanta, ka dib markii ay 2-1 kaga badisay wareega 35aad ee Premier League.
Manchester City ayaa ku hormartay gool uu u dhaliyay Raheem Sterling daqiiqadii 44-aad, intaa kadib Sergio Agüero ayaa kooxda ka khasaariyay fursad uu ku dhalin karay goolka labaad kadib markii uu tuuray laad rigoore ahaa si fududna looga qabtay qeybta hore ee ciyaarta.
Qeybtii labaad, xiddiga reer Morocco Hakim Ziyech ayaa dhaliyay goolka barbaraha ee Chelsea daqiiqadii 63aad, ka dibna saaxiibkiis Marcos Alonso ayaa goolka guusha ee kooxda daqiiqadii labaad ee waqtiga lagu daray ciyaarta dhaliyey.
Manchester City ayaa u baahneyd inay guuleysato ciyaarta maanta si ay ugu guuleysato horyaalka, laakiin Hakim Ziyech iyo Alonso ayaa ka hor joogsaday inay maanta dabaaldegaan.
Manchester City ayaa hogaanka ku heysa 80 dhibcood, 13 dhibcood ayeyna ka sareysaa kooxda ugu dhow ee Manchester United, oo ku jirta kaalinta labaad, oo dib loogu dhigay ciyaar ay la lahayd Liverpool marka lagu daro kulanka wareega 35aad oo ay la balansan yihiin Axada kooxda Aston Villa.
Halka Chelsea ay kor u qaaday dhibcaheeda kana dhigtay 64 dhibcood, waxayna soo gashay kaalinta seddexaad, iyadoo hal dhibic ka sareysa Leicester City oo ku jirta kaalinta afaraad.
Manchester City ayaa maanta ku guuldareysatay inay ka aargudato guuldaradii Chelsea, 0-1, semi-finalka FA Cup 17-kii April.
Kulan kale ayaa sugaya labada kooxood Manchester City iyo Chelsea, kaasoo ka duwan kii maanta waa finalka Champions League oo la qaban doono 29ka May.